Taariikhda My Butros » 3 Secrets in Dating on Miisaaniyadda Student ah
Sidee baan u caddayn aan taariikhda iyo weli haysan lacag ay sameeyaan dhaqdo?
Tani waa cadaadinaya arin iyo halganka loogu talagalay dhammaan ardayda dunida tacliinta sare. Toddobaadkan ee la soo dhaafay waxaan si dirqi ah bixin karin waraaqaha musqusha ee aadka loogu baahnaa, iyo qabatinka qaxwada aan ku hanjabaysa in aan jeebka baabbi'iyo. Weli, sidaan ma heli karaa sida loogu baahan yahay caffeine joogto ah, ardayda uma baxsan karo xaqiiqada ah in ay tahay xoogan.
Ku noolaanshaha on miisaaniyadda ardayga ma fududa. Haddii aad haysato waqti qayb shaqo ama waa mid ka mid ah kuwo yar oo nasiib haysta taageerada dhaqaalaha waalidkooda, waa weli dagaal joogto ah. Iskacaabinta Friday pizza habeenkii waa adag ku filan laakiin inay taasi ka sii daran, waxaa jira qodob kale in ay soo muuqdaan dhammaan kulliyadaha iyo jaamacadaha; shukaansi.
Inkastoo ay aad jiidashada iyo looks wanaagsan cajiib ah, inuu soo jiito taariikhda waxaa sida caadiga ah aad ku kici doonaa cajiinka qaar ka mid ah. Si kastaba ha ahaatee, waxaa jira iftiin dhamaadka tunnel qaali. Waa maalin aad nasiib badan maxaa yeelay saddexdan siraha kaa caawin kara inaad caddayn taariikhda isagoo arday xoogan.
Joog guriga meel u dhow ... sida aad ugu dhowaa
College waa inaad gurigaaga ka fog guriga. Dhab ahaantii, waa badan tahay in ka badan madadaalo badan gurigaaga dhabta ah. Sidaa darteed aad leedahay faa'iidooyin badan oo ka iman kara fikrado taariikhda saxda ah ee faraha aad.
Habeen A movie iyo kala cunto. Netflix ayaa la macno usameeyay caruurta kuleejada.
Cook wada (karinta microwave weli ku tiriyaa!)
Play kulanka guddiga a, Kaararka ama ciyaarta video ah
Dhis buste Fort wada. Qof kasta ilmaha ee wadnaha, ma dafiri
Waayo lamaane more artsy-fartsy, samayn farsamo ama wada midabeeyo
Just hadal fudud iyo hab-siinta sida caadiga ah ka shaqeeyaa yaabab
Samee qorshe miisaaniyad
Waxaad ma bartaan wax kasta oo fasal ah. Xirfad qorshaynta miisaaniyadda waa mid qiimo leh oo aad u faa'iido badan. Inkasta oo aad u ma qori karaan on your resume waxay kaa caawin doona inaad noqon fiican oo ku saabsan lacagtaada. Fadhiiso, bax qalin iyo waraaq (ama jeedo u badan tahay ee aad laptop) iyo qiyaaso kharashka bil kasta. Tani waxaa ka mid ah cuntada, madadaalo, daruuriyaadka, Qalabka iskuulka, iyo ugu muhiimsan taariikhaha. Isku day inaad hoos u dhigay kaliya waxa aad ku noolan karin bilaa. Next, dari costys si wadajir ah u hesho wadarta ah keentay of inta aad ka isticmaali karto bil kasta. Hadda yimaado tartan ka; isku day in aan in ka badan xaddi tago, iyo xitaa ku qaataan yar haddii ay suuragal tahay. Hadda waxaad noqon kartaa sweetheart run ah, bixin weli u biilka iyo ma dareemaan gebi xoogan.
Isticmaal Resources Your
Hantida ugu weyn waa hantida. Waxaan u muuqan sida Faylasuuf qabow oo leh shaqaale ah oo ka samaysan alwaax iyo gadhka lakiin ma rabo inaan. Sida ardayda aan leeyihiin faa'iido badan. Waxaad ogaan kuwa buugaagta coupon aad heshay bilowgii sanadka oo aan la furay tan? Well, ay kuu dhaansan full of lacag kedin taariikhda fikrado ... digtoonaadaan kuwa tattoo-dhimis inkastoo. Waxaa halkaas kuma dhammaato. Waxba ma ahan meesha aad ku tagto dugsiga, Waxaan idiin xaqiijin karaa dukaamada in badan, makhaayadaha iyo goobaha ganacsiga oo ku xeeran xarunta dhimis dalab arday. Qaad fursadahaasi iyo badbaadin lacag on qalabka dugsiyada, cuntada iyo in ka badan inta. Waxaa jira heshiisyo xad-dhaaf ah, beec iyo deeqo loogu talagalay oo keliya ardayda. Noqoshada boqoradda kuuban ama boqorka aan wax laga xishoodo.
Kuwan saddex siraha, waxaad noqon doontaa celin. Waxaad ka adkaan kara adduunka shukaansi fudayd weyn oo weli haysan lacag hadhay si ay u muujiyaan waxa ay u. Sidaas soo tagaan oo ay qabsadaan Quluubta qaar ka mid ah iyo qaar ka mid ah lacagta badbaadiyo.